Jijjiiramni qilleensaa dhibee onneef nama saaxila-qorannoo – Fana Broadcasting Corporate
Jijjiiramni qilleensaa dhibee onneef nama saaxila-qorannoo
Global healthcare. Globe and stethoscope, studio shot.blue toned images
Finfinnee, Bitooteessa 4, 2011 (FBC)- Qorannoon haaraan amma gaggeeffame tokko akka mul’iseetti jijjiiramni qilleensaa dhibee onneef sadarkaa ol aanaan kan nama saaxilu ta’uudha.
Qorannoon barruu onnee Aworooppaa irratti maxxanfame tokko akka mul’isutti, gosti dhibeewwan onnee tasa dhufanii baay’een jijjiirama qilleensatiin kan walqabataniidha.
Qorattoonni qorannoo kana irratti hirmaatan, ragaa dhukkubsattootaa akka lakkoofsa Aworooppaa bara 1987 hanga 2014tti jiru ragaa dhukkubsattootaa akka lakkoofsa Aworooppaa bara 2001 hanga 2014tti jiruun walbira qabuuni qorannicha kan hojjatan.
Ragaan dhukkubsattootaa qorannicha irratti walitti qabamanii ragaa haala qilleensaa wayita sana jiru waliin walfakkeessuun erga tokko akka ilaalaman godhameera.
Qorannoon ragaalee irratti godhame akka mul’isutti ho’iinsa qilleensaa yeroorraa gara yerootti dabalaa deemuun walqabatee hammi dhibee onneef saaxilamuu namootaas dabalaa akka dhufe qorattoonni kun mirkaneessaniiru.
Qilleensi qorraan immoo hamma dhibbaa dhiigaa ni dabala kan jedhan qorattoonni kunneen, dabalataanis gosti qilleensa kanaa dhibee onneef akka nama saaxilu qorannoo isaaniin irra gahaniiru.
Dhummarrattis qorattoonni kunneen qorannoon isaanii jijjiirama qilleensaa naannoof xiyyeeffannoo ol aanaan kennamuu akka qabu kan mul’iseedha jechuun dubbataniiru